China containerized oksizenina fanafody orinasa sy ny mpanamboatra | Sihope
Ny ozinina famokarana oksizenina ao amin'ny Sihope dia rafitra famokarana oksizenina izay naorina ao anaty kaontenera. Ny oksizenina dia novokarina avy amin'ny rivotra mipoitra amin'ny alàlan'ny teknolojia pressure swing adsorbtion (PSA). Ity teknôlôjia ity dia manasaraka oksizenina amin'ny gaza hafa eny amin'ny rivotra amin'ny tsindry. Ny rafi-drivotra compressed ary koa ny rafitra fanasarahana oksizenina dia tafiditra ao anatin'ny fitoeran-javatra ary maneho vahaolana mirindra ho an'ireo izay tsy manana toerana ho an'ny rafitra famokarana oksizenina ao anatin'ny tranobeny na mila orinasa mpamokatra oksizenina amin'ny toe-javatra mafy.
Sihope dia mamokatra ny zavamaniry ao anaty container, amin'ny maha-isan'ny mpanamboatra vahaolana ho an'ny famokarana oksizenina, IN-HOUSE. Midika izany fa manara-maso ny dingana rehetra amin'ny famokarana izahay ary noho izany dia manao izay rehetra atao araka ny fenitra.
Ny endri-javatra amin'ny orinasa containerized
Azo entina (fandalovana ho an'ny fork-lift sy bolt-on ISO zorony) Turnkey,
Natao ho an'ny ivelany - ny fitoeran-javatra dia fiarovana tsara amin'ny orana sy ny masoandro,
Fanombohana sy fiatoana mandeha ho azy,
Fanerena fivoahana mahazatra 4 barG; fanerena ambony azo atao amin'ny fangatahana
Ny fitaovana dia azo ampitaina amin'ny rafitra fanaraha-maso sy fanairana feo / maso ho safidy.
fahafahana: 5 hatramin'ny 100 Nm3/h
Fahadiovana: 90%, 93%, 95%
container ISO: standard 10ft., 20ft. na 40ft.
Vidin'ny asa: 1.1 kWh/Nm3
Ny fitaovana natao ho an'ny mari-pana ambony amin'ny tontolo iainana dia manana insulation fitoeran-javatra sy ny rivotra; ny ambonin`ny dia tsaboina amin`ny coating manokana.
Ny oksizenina avy amin'ity vondrona mpamokatra oksizenina ity dia ampiasaina amin'ny fampiharana maro toy ny fikarakarana ara-pahasalamana, fiompiana trondro, ozone, rano maloto, asa fitaratra, pulp-sy-taratasy sns.
Ozinina famokarana oksizenina finday no tiana indrindra amin'ny famolavolana vahaolana ho an'ny ivelany. Azo apetraka eo amin’ny tafon’ny trano na any amin’ny faritra lavitra. Raha manana fepetra manokana ianao dia aza misalasala mifandray aminay ary hamolavola vahaolana mifanaraka amin'ny zavatra takinao izahay.
teo aloha: Ozinina Oxygène ampiasaina amin'ny OEM - Fanamainana rivotra tsy misy hafanana fanadiovana - Sihope
Manaraka: milina fanaovana oksizenina delta p
Vidin'ny ozinina oksizenina ara-pitsaboana
Ozinina Oksizenina Oksizenina Oksizenina Oksizenina
Ozinina famokarana oksizenina
Ozinina Manufacturing Oxygène
Vidin'ny orinasa mpamokatra oksizenina
Ozinina famokarana oksizenina hopitaly China
ozinina oksizenina hopitaly cabin mobile